राेचक-खबर – Kumbha Khabar
Babita	 २२ भाद्र २०७६, आईतवार १४:४१ 0
पोल्याण्डको चेक रिपब्लिकको सीमासँगै जोडिएको एउटा सानो गाउँमा विगत ९ वर्षदेखि छोरा जन्मिएको छैन । गाउँमा बस्ने सबैभन्दा कान्छो बालक १२ वर्ष पुगिसकेका छन् । यसैकारण त्यहाँ छोरा जन्माउने पहिलो जोडीलाई उपहारको घोषणा गरिएको छ । मिइज्स्से…
Babita	 २२ भाद्र २०७६, आईतवार १४:३४ 0
लगातार छोरामात्र पाइरहेका एक जोडीले ११ औं सन्तानको रुपमा छोरी पाएपछि आफ्नो परिवारले पूर्णता पाएको बताएका छन्। २२ वर्षको उमेरमा पहिलोचोटि आमा बनेकी स्कटल्यान्डकी एलेक्सिस ब्रेटले १५ वर्षको उमेरमा १० सन्तान जन्माइन्। ती सबै छोरा थिए।…
भालेले डिस्टर्ब गर्यो भनेर मुद्धा हाल्ने आफै कार्वाहीमा
Babita	 २१ भाद्र २०७६, शनिबार ०७:४४ 0
एकाबिहानै भाले बासेका कारण छिमेकीहरुलाई ‘डिस्टर्ब’ भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने उल्टो कारबाहीमा परेकी छिन् । फ्रान्सको वाज क्षेत्रको मारिनी ले कम्पिन्यिय निवासी निकोला बुसेको भाले बासेर ‘डिस्टर्ब’ गरेको आरोपमा उनकी छिमेकी…
तपाईले सपना बिर्सनुभयो, अब यसरी सम्झन सकिन्छ
Babita	 २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १५:२४ 0
काठमाडौँ- सपना बिर्सिएँ भन्ने तपाईँको चिन्ता अब दूर हुने भएको छ। एक वैज्ञानिक अध्ययनमा अब सपना सम्झने तरिका पत्ता लागेको छ। वैज्ञानिकका अनुसार भिटामिन बी–६ ले सपना सम्झन मद्दत गर्ने अध्ययनमा पत्ता लागेको हो। शोधकर्ताले अध्ययनमा संलग्न…
स्मार्टफोनले जीवनस्तर नै स्मार्ट
Babita	 २० भाद्र २०७६, शुक्रबार १०:०९ 0
चमेरोले पनि ब्युटी पार्लरको सुविधा
Babita	 १९ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:२३ 0
ब्युटी पार्लरले खास गरी महिलालाई फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युरलगायत सौन्दर्यसम्बन्धी विभिन्न सेवा दिन्छ। क्युबामा भने चमेरोले पनि ब्युटी पार्लरको सुविधा पाउन थालेको छ। सोलीजस्तो कान हुने दुर्लभ प्रजातिको चमेरोको संरक्षण गर्न…
Babita	 १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १०:२९ 0
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा झन्डैझन्डै पूर्ण अवस्थाको प्राचीन मानव खप्पर फेला परेको छ । उक्त खप्पर आजभन्दा ३८ लाख वर्ष पहिले यस धरर्तीमा विचरण गर्ने मानव पुर्खाको हो भन्ने विश्वास गरिएको छ । मानव पुर्खा मानिएको अस्ट्रालोपिथेकस…
जोडीको सम्बन्ध टुट्नुमा परुषको स्वभाव र बानी प्रमुख कारण ?
Babita	 १६ भाद्र २०७६, सोमबार ०९:०३ 0
एजेन्सी । अहिले पनि मान्यता छ कि विवाहित होस् या अविवाहित जोडीको सम्बन्ध टुट्नुमा परुषको स्वभाव र बानी प्रमुख कारण मानिन्छ । विवाहित जोडीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा पुरुषको ‘धोकेवाज’ बानीलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । यदि यस्तो हो भने पुरुषहरु…
अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा बदमासी गर्न सकिन्छ ?
Babita	 १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०८:०० 0
न्यूयोर्क । अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा बदमासी गर्न सकिन्छ ? अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री एन म्याकक्लेन उहींबाट उनका पूर्वपतिको बैंक खाता चलाएको अभियोग खेपिरहेकी छन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) ले यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। र, उनले यसलाई…
जीवन जति संवेदनशील छ सम्बन्ध पनि उत्तिकै
Babita	 ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १७:०२ 0
काठमाडौँ । समबन्धलाई मानिसहरु मुठ्ठीभित्र रहेको पुतलीसँग तुलना गर्छन् । मुठ्ठी बेस्सरी कस्नुभयो भने पुतली मर्छ, खोल्नुभयो भने उडेर भाग्छ । सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो, एक – अर्कालाई केरकार बढी गरियो भने भित्रभित्रै सम्बन्धमा चिसोपना आउँदै…